photoshop - စာမျက်နှာ3- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: photoshop (စာမျက်နှာ 3)
လက်ထောက်အယ်ဒီတာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: 8 / 21 - 12 / 20 လစာ / နှုန်းသည် Tier 1 ယောဘသည် 08 / 15 / 19 08 / 21 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သမျှရှာဖွေနေရဲ့ယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ post ကိုကြီးကြပ်သူတစ်ဦးအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်များအတွက်ပြည်ထောင်စု AE လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Burbank အတွက် Adobe Premiere စီမံကိန်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါ ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်နယူးဂျာစီပြည်နယ် Duration: 8 / 17 - 8 / 20 လစာ / နှုန်း $ 200 / 12 ယောဘသည် 08 / 15 / 19 အပေါ် posted 08 / 17 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ယောဘနယူးဂျာစီပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်းအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ): တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း-နောက်ဆက်တွဲရိုက်ကူးအပေါ်သေးငယ်တဲ့ကင်မရာသင်္ဘောသားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အားကြီးသော PA ဆိုပြီးလိုအပ်ခြင်း။ သြဂုတ် 17 - 20 ။ rate $ 200 / 12 ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်ကို Now ကို Upgrade ...
အနုပညာ PA ဆိုပြီးကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး Duration: / နှုန်း $ 200 / 10 ယောဘသည်လဂ်ဘုခ်, တက္ကဆပ်နဲ့ Philadelphia တစ် Pop- များအတွက် PA ဆိုပြီးအနုပညာ pas ရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လစာထောက်ပံ့ပေးမပေး သူတို့အားနှစ်ခုမြို့ကြီးတွေမှာ up ကို install လုပ်ပါ။ $ 200 / 10 8-6: 30 (30min နေ့လယ်စာ) နှင့်လူအပေါင်းတို့ပစ္စည်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုအပ်ပါလိမ့်မည် / တည်နေရာမှတက်ခူး။ ...
ညဥ့်လက်ထောက်အယ်ဒီတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: လစာ / နှုန်းယောဘသည် 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကျနော်တို့ညဥ့် AES ရှာဖွေနေတဲ့ယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားပေးမပေးဘူး။ network ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မတိုင်မီကအတွေ့အကြုံကိုကင်မရာများစာရေးတစ်ဦးပေါင်းနှင့်အတူပြသထားတယ်။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? နောက်ထပ်ခုနှစ်တွင် Sign ကျေးဇူးပြု. ...
script Supervisor ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Nashville, TN Duration: 8 / 20 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေး 08 / 15 / 19 အပေါ် posted ယောဘကိုရှာကြံယောဘ Nashville, TN ဒေသခံအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 20 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply: -SCRIPTY - VTR က Non-ပြည်ထောင်စုနေ့စွဲ (နှုန်းမှာအဘို့အမေးမွနျး ကျေးဇူးပြု. ): 8 / 20 Project မှ: အမေဇုံဂီတကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်မရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်လျှောက်ထားပေးပါ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? ကျေးဇူးပြု ...
အငယ်တန်း Editor ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဝါရှင်တန်, 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် DC က Duration: Freelance လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမငါကိုမှန်မှန်ငါနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်အနည်းငယ်အလွတ်တန်းအငယ်တန်းအယ်ဒီတာများရှာနေတာ (တွေအကြောင်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် paid သင်တန်းတစ်ပတ်ကို 5-10 နာရီ,) အချို့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ကူညီဖို့ရန်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ကိုပါလိမ့်မယ် ...
ဓာတ်ပုံဆရာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration:9/9-9/ 12 လစာ / နှုန်း 08 / 15 / 19 09 / 09 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့ရှာနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး Los Angeles မြို့စက်တင်ဘာလ 9-12 (4 ရက်) အတွက်ရိုက်ကူးများအတွက်ရရှိနိုင်စီးပွားဖြစ်ကြံ့ခိုင်ရေး / အားကစားအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဓာတ်ပုံဆရာသည်။ သင့်ရဲ့အစုစုနှင့်နှုန်းကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အခုတော့ Upgrade ...
VTR အော်ပရေတာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Nashville, TN Duration: 8 / 20 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေး 08 / 15 / 19 အပေါ် posted ယောဘကိုရှာကြံယောဘ Nashville, TN ဒေသခံအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 20 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply: -SCRIPTY - VTR က Non-ပြည်ထောင်စုနေ့စွဲ (နှုန်းမှာအဘို့အမေးမွနျး ကျေးဇူးပြု. ): 8 / 20 Project မှ: အမေဇုံဂီတကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်မရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်လျှောက်ထားပေးပါ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? ကျေးဇူးပြု ...
လက်ထောက်အယ်ဒီတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: စက်တင်ဘာလလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစက်တင်ဘာလဘို့ငါက NYC အတွက် post ကိုညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် AES အဘို့အကြည့်ဖို့စတင်တာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် HGTV များအတွက်နေအိမ်အဆောက်အဦပြပွဲပေါ်မှာ။ အကောင်းဆုံးကတော့, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပြီးသားကြောင်းအတွက် HGTV / Discovery နှင့်အတူအချို့သောအတှေ့အကွုံရပါလိမ့်မယ် ...
အနုပညာ PA ဆိုပြီးကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်လဂ်ဘုခ်, တက္ကဆပ် Duration: / နှုန်း $ 200 / 10 ယောဘသည်လဂ်ဘုခ်, တက္ကဆပ်နဲ့ Philadelphia တစ် Pop- များအတွက် PA ဆိုပြီးအနုပညာ pas ရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လစာထောက်ပံ့ပေးမပေး သူတို့အားနှစ်ခုမြို့ကြီးတွေမှာ up ကို install လုပ်ပါ။ $ 200 / 10 8-6: 30 (30min နေ့လယ်စာ) နှင့်လူအပေါင်းတို့ပစ္စည်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုအပ်ပါလိမ့်မည် / တည်နေရာမှတက်ခူး။ ...
လက်ထောက်အယ်ဒီတာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Northridge,, CA Duration: အချိန်ပြည့်, 8 / 26 လစာ / နှုန်း 08 / 15 / 19 08 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်ခုလက်ထောက်အယ်ဒီတာရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေးစတင်သည် မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူဂီတမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီး။ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြတ်တောက်ခြင်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိထားသင့်: Archive မိုးသည်းထန်စွာစာရွက်စာတမ်းများအတွက် -Working ...
လက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: လစာ / နှုန်း $ 15- $ 30 အလုပ်ချိန်နာရီယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး / အလုပ်ချိန်နာရီယောဘ Assistant / Desk လွှမ်းခြုံ / $ 08- $ 15 အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 19 / 15 / 30 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် လက်ထောက်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, ကော်ပိုရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖျော်ဖြေရေးအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်စားပွဲခုံလွှမ်းခြုံနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအကူအညီများပေးဘို့အေဂျင်စီများ, Networks နှင့် Studios ကချက်ချင်းလိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များ ...
08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: မပေးထားလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘယောဘသည်တစ်ဦးကထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာရာထူးကိုတက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မ ASAP တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေတာပါအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဟောလိဝုဒ်ရုံးအခြေစိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနေအထားခရီးသွားလိုအပ်သည်။ သငျသညျစည်းရုံးရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဖှယျဆောင်ခဲ့ရမည် ...
8 / 18 / 08 အပေါ် posted နယူးယော့ Duration: 15 / 19 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘခြေတုအဘို့အ SPFX မိတ်ကပ်အဆိုတော်များရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 18 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply လို့လည်းသိကြပါတယ်မိတ်ကပ်အဆိုတော်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်နယူးယောက်, (အရိုးစုလူတွေထင်) - အုပ်စုခွဲရိုက်ကူးတနင်္ဂနွေ 8 / 18 ညနပေိုငျးတနင်္လာနေ့နံနက်ကတဆင့်, Yonkers အတွက် Alder Manor မှာကြီးမားတဲ့ဂီတဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေး။ ကျေးဇူးပြု ...
avid Editor ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်နယူးယောက်, 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်နယူးယော့ Duration: ASAP လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘကျနော်တို့ asap စတင်ရန်တစ် docusoap စီးရီးများအတွက် Avid အယ်ဒီတာများရှာဖွေနေတဲ့ယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ပါ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? >> ပိုခုနှစ်တွင် Sign ကျေးဇူးပြု.
Preditor ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: အထူးသဖြင့်, အတွေ့အကြုံလုပ်နေတာကွန်ယက်ကိုအဆငျ့ unscripted sizzles နှင့်အတူ * တစ် LA က-based preditor ရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘမပေးထား * ရောင်း 2-3 အဖြစ်မှန် / doc ပုံစံများအတွက်သူမ၏ / မိမိတည်းဖြတ်ရေးဆော့ဖျဝဲ / System (Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ်ပိုမိုနှစ်သက်) တွင်ထွက်ပေါ်လာမည့် sizzles နှင့်အတူရှိသည်ဟုသောသူတို့ကိုအ ...
3 ၏စာမျက်နှာ 420«12345	»	102030...နောက်ဆုံး»